वाइडबडी विमान खरीदबारे अध्ययन गरिने, कस्तो आउला नतिजा ? - Everest Dainik - News from Nepal
वाइडबडी विमान खरीदबारे अध्ययन गरिने, कस्तो आउला नतिजा ?
काठमाडौं, असोज ११ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमका वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस जसले नेपालमा युएस बंगला विमान भित्र्याए, दुर्घटनामा अस्ताए उनी पनि
बैठकमा हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेमबहादुर आले, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्त, धर्माशिला चापागाईलगायतले वाइडबडी विमान खरीद अनियमितता, बेरुजु फछ्र्योट, द्रुतमार्ग निर्माणलगायत विषयमा चाँसो व्यक्त गरेका थिए । -रासस
ट्याग्स: aeroplane, Waibady biman
सिन्धुपाल्चोक बाढीपहिरोः बेपत्ता २० जनाको खोजीकार्य जारी